सुदुरपश्चिम « Dainik Online
प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ५ सुदुरपश्चिम गण्डकी प्रदेश कर्णाली प्रदेश
पहिरोमा पुरिएर ४ महिने बालकको मृत्यु
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विपक्षी दलका सांसदहरुको नाराबाजी
धनगढी । सुदूरपश्चि प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा विपक्षी दल राजपाका सांसदहरुले नाराबाजी गरेका छन् । कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुको विरोध पछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको
सुदूरपश्चिममा थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप १० जना कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमित थपिएका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १० जनामा कोरोना संक्रमण
बझाङको पहिरोमा पुरिएकाको उद्दार गर्न गएको सेनाको गाडी दुर्घटना
चैनपुर । बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मा गएको पहिरोमा पुरिएकाहरुको उद्धारका लागि गएको नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटनामा परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार शनिबार दिउँसो बझाङ सदरमुकाम (तलकोट)बाट उद्धारका लागि
नहरमा हाम फोलेका युवकको शव फेला
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१ भाँसीस्थित महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा हाम फालेर बेपत्ता भएका २३ वर्षीय राकेश चौधरीको शनिबार (आज) शव फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार
बझाङ पहिरो : एकै परिवारका तीन जनाको शव भेटियो
बझाङ । शनिवार विहान केदारस्युँ गाउँपालिका–८ मल्लेसीमा पहिरो जाँदा हराएका सात मध्ये मध्ये तीन जनाको शव फेला परेको छ । उनीहरु एकै घरका सदस्य हुन् । आमा ५० वर्षीया राममती
धनगढी पुग्यो चिकित्सक टोली
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या बढेसँगै जोखिम बढेपछि काठमाडौँबाट ३३ जना चिकित्सकको टोली शुक्रबार धनगढी पुगेको छ। सङ्क्रमित र शंकास्पद बिरामीको उपचारमा सघाउन र अन्य बिरामीको उपचारका लागि
सिद्धराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा प्रदेशमा आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थापन गर्ने कामलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ। यसैगरी प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाउनु र
कानूनले रोक्न नसकेको छाउपडी प्रथा
डोटी । डोटी जिल्लामा केही महिना यतादेखि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ। अहिलेसम्म ५०० भन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए। यो अभियानको अगुवाइ गरेका छन् प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले। अनि यसको
डोटीलगायत उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
डोटी । बुधबारदेखिको मौसममा आएको परिवर्तनका कारण डोटीलगायत यहाँका पहाडी तथा हिमाली जिल्ला बझाङ, बाजुराका उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । हिमपात भएसँगै चिसो बढेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको
फेसबुक लाइभ गरेर चितवनकी युवतीले आफैलाई फाँसी दिइन्!
काठमाडौं । पछिल्लो समय फेसबुकमा लाइभ गर्दै आत्महत्या गर्नेक्रम बढ्दो छ। हालै दाङमा यस्तै घटना
नेकपा विवाद : चिनियाँ राजदूत र नेता नेपालबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेकपामा अन्तरसंघर्ष चर्किएकाबेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा वरिष्ट नेता माधव
नेकपाको घरझगडामा कांग्रेस सहभागी नहुने : प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने, पार्टी विभाजन गर्ने वा
देउवासँग मिले जस्तो गरि पार्टीका नेतालाई तर्साउदै ओली!
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर
बीबीसीले भन्यो, नेपालले खोज्यो भारतका यी मानिसको रोजीरोटी
काठमाडौँ । नेपाल भारत सीमा विवादको असर भारतीय बजारमा देखिएको छ। नेपालको निर्णयपछि भारतीय बजार
पार्टी नफुटाउन भन्दै जिल्ला अध्यक्षहरुले पठाए ओली र प्रचण्डलाई पत्र
विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नं १ का १४ वटा जिल्लाका अध्यक्ष एवं
शिरानीमा राख्नुस् हनुमान चालिसा, मिल्छ यस्तो लाभ !
अस्तव्यस्त जीवनशैली, खानपान, तनाव र थकानका कारण आजभोलि मानिसहरुलाई निन्द्रा नपर्ने समस्या देखिन थालेको छ
भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै काँग्रेस मुख्यालयमा नेविसंघको प्रदर्शन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले पार्टी भित्रका भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै